राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली – Gorkhali Dainik
April 7, 2021 206
THE GORKHA NEWS: काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट राजीनामा दिने मुडमा पुगेका छन् । सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को शरणमा परेपनि नटिक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिन तयार भएका हुन् । नेकपा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि संकटमा परेका ओलीले सत्ता टिकाउन अनेक प्रयत्न गरे ।
उनले सत्ता टिकाउन कांग्रेस र जसपाको साथ खोजे । तर, दुवैको साथ नमिल्ने भएपछि ओली मानसिक रूपमा राजीनामा दिन तयार भएका हुन् । शनिबार बालुवाटारबाट देशका विभिन्न सडकहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैँले राजीनामा दिने बताएका छन् । ओलीले भनेका थिए- ‘राजीनामा माग्यामाग्यै छन् त । मागेपिच्छे कसरी राजीनामा दिन सक्छु ?
माग्या छ, माग्या छ । ए, बाबा हटाउ न त । समर्थन फिर्ता लिइदेउ भन्छु, लिँदैनन् । राजीनामा आइहाल्छ नि समर्थन फिर्ता गर न ।’ ओली राजीनामा दिन मानसिक रूपमा तयार हुनुका दुई कारण छन् । पहिलो, आफ्नो सत्ता ढाल्न बन्दै गरेको नयाँ समीकरण । दोस्रो, विश्वासको मत लिनु पर्दाको अंकगणित । यी दुवै कुरा आफू अनुकूल नरहेको बुझेपछि ओली राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताइन्छ ।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेसमा ‘आइस–ब्रेक’ हुँदा ओलीको राजीनामा मागियो । यसको मतलव कांग्रेस–माओवादी सत्ता समीकरणनजिक छन् । कांग्रेस–माओवादीले संयुक्त रूपमा जसपासँग छलफल थालेका छन् । कांग्रेसको निर्णयलगत्तै जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीटमार्फत स्वागत गरे । भट्टराईको ट्वीट यस्तो छ–
‘अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने संकेत सराहनीय छ । अरू प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुलौँ । आ–आफ्ना दलका फरक एजेण्डा हुन्छन् । तर, ती सबैभन्दा माथि देश, जनता र लोकतन्त्रको आवश्यकता/प्राथमिकता हुन्छ । आजको दिनमा मुख्य प्राथमिकता भष्मासुर ओलीको विदाइ नै हो है !’
शुक्रबार र शनिबारको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ । नयाँ समीकरण भन्ने भएपछि ओली राजीनामा दिन मानसिक रूपमा तयार भएका हुन सक्छन् । त्यसो त नयाँ सत्ता समीकरण नै बनेपनि ओली विकल्पविहीन भने होइनन् । अझैपनि सिंगो जसपा र सिंगो एमालेको मतमा ओली प्रधानमन्त्रीकै रूपमा रहन सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना अब छैन । ओलीले त्यो बुझेका छन् । ओली संसदीय गणितसँग डराएका हुन् ।
गणित यस्तो छ– हाल नेकपा एमालेको मत १२१ छ । जसपाको मत ३२ छ । एमाले र जसपाको मत जोड्दा १५३ हुन्छ । सत्ता टिकाउनका लागि यो पुग्दो मत हो । तर, ओली नेतृत्वको एमाले र जसपाबीच सत्ता समीकरण बनेपनि ओली सत्ता टिक्ने देखिँदैन किनकि, एमालेका १२१ मतमा माधवकुमार नेपालसँग प्रतिवद्ध ३० मतले ‘फ्लोरक्रस’ गर्नेछन् ।
माधव समूहका ३० मतले ‘फ्लोरक्रस’ गर्दा ओलीसँग १२३ मतमात्र हुन्छ । जुन मत सरकार टिकाउन अपुग हुन्छ । ओलीले यो गणित बुझिसकेका छन् । त्यसैले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । एमाले ओलीसँग समीकरण बनाउँदा पनि नयाँ सरकार नबन्ने अवस्था बुझेपछि जसपा ओलीसँग सत्ता सयर नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
ओलीले यो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले ब्याक हुन अवस्थामा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको हो । किनकि, समर्थन फिर्ता लिएपनि नयाँ सरकार बनाउने अवस्था नबनेकाले माओवादी ‘होल्ड’मा थियो । तर, कांग्रेसको निर्णयले माओवादील ‘ब्रेक–थ्रु’को अवस्थामा पुगेको छ । ब्याक सपोर्टमा कांग्रेस छ ।
कांग्रेस-माओवादी जसपासँग संयुक्त छलफलमा जुटेकाले अब त्रिकोणात्मक सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । जसपा पनि नयाँ समीकरणका लागि तयार रहेकाले अब ओली, धेरै दिन प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने छैनन् । त्यसैले, विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । श्रोत दृस्टी न्युज
Prevनेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि अत्याधिक बल प्रयोग : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
Nextअमेरिकाले बनाएको हाइपरसोनिक मिसाइल : परीक्षण असफल
भित्र दलित बाहिर अर्कै जात भन्दै हिड्नेहरुलाई कार्वाही गर्छु : अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा
श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले………
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (7250)
दुखद खबर : अभागी आमा चम्ल्याहा बच्चाको जन्म त दीईन तर मुख हेर्न पहीन्न, आमाको मृत्यु (3795)